Angry Birds AR: Masiaka fotsiny ny Nosy Pig ary ny tsara indrindra amin'ny taona 2019 | Androidsis
Angry Birds AR: Isle of Pigs dia lalao vaovao avy amin'i RovioRaha hilaza ny marina dia nanantena izahay fa tsy olana lehibe izany. Lazainay izany satria tato ho ato dia ny lalao KING tic-tac-toe no navoakany. Saingy amin'ity indray mitoraka ity dia mitondra lalao mamorona tanteraka antsika izay mitondra lalao marim-pototra mihombo amin'ny sehatra hafa.
Ary tsy milaza izany izahay noho ny hevitra, izay tsara, fa ho an'ny fomba tsara hitondrana azy any amin'ny lafiny teknika ary hanovana ny fisaka rehetra ao amin'ny toerana filalaovana tsara indrindra azonao eritreretina noho ny findainao, zava-misy nampitomboina ary ity lalao vaovao avy any Rovio ity. Eny eny.
1 Tena Zava-misy Augmented io
2 Safidio ny lalao milalao ny tranonao na aiza na aiza, ary milalao!
3 Ny fizika misy zavatra rehetra ao amin'ny Angry Birds AR: Isle of Pigs
Tena Zava-misy Augmented io
Pokémon GO dia iray amin'ireo lalao voalohany nametraka ny Augmented Reality ho mpamorona, saingy afaka milaza isika fa na dia ity Angry Birds AR: Isle of Pigs ity, ary fotoana fohy taorian'ny Minecraft Earth dia zava-misy, rehefa nanao dingana ambony ny AR mba hanoro antsika ny lalana amin'ny alalàn'ny lalao maro no tsy maintsy hizahan-tsain'ity Rovio ity. Izahay akory tsy te-haka sary an-tsaina mpilalao marobe toa izany.
Angry Birds AR: Isle of Pigs dia zava-bita tokoa rehefa miresaka Augmented Reality. Izahay dia miresaka momba ny fahafahanao mampiasa ny sehatra rehetra ka "hiteraka" amin'ny Augmented Reality ny lalao, noho ny fanampian'ny fakantsary findainao.
Ny zavatra voalohany hataontsika hisafidy ny faritra milalao hanondroana azy miaraka amin'ny fakantsary. Ary ny zavatra mahagaga indrindra, raha mbola manana hazavana ampy isika dia hiteraka haingana ny lalao mba hahafahantsika mahita tsara ny lalao eo amin'ny gorodon'ny tranontsika na amin'ny latabatra rehetra; Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny mahita ny pikantsary nalainay mba hahafahanao mamadika azy io fotsiny amin'ny zava-misy nitombo an'ity lalao Rovio ity.
Safidio ny lalao milalao ny tranonao na aiza na aiza, ary milalao!
Rehefa nametraka ny faritra filalaovana ianao dia ho hitanao ny fomba ny ambaratonga hilalaovanao dia mbola eo ihany ny kitihana, kitihina ary ankafizina. Mba hanomezana anao hevitra tsara kokoa dia hatao amin'io faritra manokana io ny lalao. Azonao atao ny mihodina manodidina azy, miverena mba hahitanao azy lavitra na hijoro hahita fomba fijery hafa momba ny haavony mihitsy aza.
Ary eo koa no mahatonga antsika gaga be. Satria azo atao manana ambaratonga mihoatra ny 40 ny Angry Birds AR: Isle of Pigs ambony latabatra, eny amin'ny valan-javaboary na amin'ny tany fotsiny. Hiara-mihetsika amin'ny lambam-paty isika ka ny iray amin'ireo «kisoa» avy amin'ny Angry Birds dia napetraka tahaka ny sinoa hitifitra mba hamelezana ireo lampihazo maivana sy malemy hanipazana ireo kisoa.
Hanao ho fanandramana atosika hanondro sy hisafidy amin'izay ny fomba fijery tsara indrindra hahavoa ilay toerana marina. Ary averinay indray, ny fahatsapana ny fivezivezena amin'ny ambaratonga namboarina tao amin'ny Augmented Reality dia tena hisy tokoa mba hahafahanao mankafy amin'ny maha dwarf miaraka amin'ny mpiara-miasa, namana, fianakaviana, mpiara-miasa ... Mahagaga ny zavatra nataon'i Rovio tamin'ity lalao ity.
Ny fizika misy zavatra rehetra ao amin'ny Angry Birds AR: Isle of Pigs
Ary tsy tsy fahampiana fanavaozana miaraka amin'ny Augmented Reality, na koa tsy fisian'izany fizika zavatra izay nampalaza an'i Angry Birds izany. Izany hoe, hisy lalao hiteraka araka izay azonao atao amin'ny Angry Birds rehetra. Miaraka amin'ireo fotoana mampihomehy izay hianjeran'ny tsirairay, na amin'ny fotoana hafa izay toa tsy nahavita tsara ianao tamin'ny farany, saingy nilatsaka ny firafitra. Ary efa zatra rehetra ny fahaizana mampifanaraka ny haben'ny lalao amin'ny toerana misy anao, izay manome traikefa tsy misy lalao hafa.
Ara-teknika dia lalao angano io ary mila milina tsara ianao. Tsy maintsy manome fotoana tena mitombo ianao, koa raha mandeha miaraka amin'ny gadget 3 taona ianao dia aza manantena majika. An Angry Birds AR: Isle of Pigs izay mitondra Augmented Reality amin'ny ambaratonga hafa ary tsy tsy ampy amin'ny sary mahaliana, famolavolana toetra, fizika zava-dehibe ary izay rehetra nahatonga an'i Angry ho malaza vorona. Andao lazaina dia namorona traikefa tsy manam-paharoa amin'ny ambaratonga avo indrindra.
Angry Birds AR: Tonga ny Isle of Pigs nefa tsy dia misy dikany loatra, saingy saika azontsika lazaina izany izay apetraka alohan'ny iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ny taona. Saika ny zava-baovao indrindra, ary efa manana traikefa Augmented Reality mitovy isika, fa i Rovio no afaka namaritra izany mba hahafahanao mankafy tsy mbola nisy toy izany tamin'ny findainao; Eny, amboary ny bateria, satria ianao dia hisarika ny fakantsary fakantsary sy ny loharanom-pahalalana mba hamoronana sary, filalaovana ... Lalao mahafinaritra ary farany afaka milaza isika fa mitondra zavatra tena tsy mitovy amin'ny nataon'ity farany i Rovio taona. Tena vatosoa.
Angry Birds AR: Nosy Pig
Mahatalanjona sy traikefa tsy manam-paharoa
Mampiasa ny sehatra rehetra hiteraka haavony
Ny tena zava-misy dia tena mandeha tokoa
Ny fananana "any" amin'ny sehatra rehetra izay azonao atao ny mikitika sy milalao toy ny majia
Mampiasa bateria izy, mazava ho azy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Rovio dia manaitra ny zava-misy marina momba ny Angry Birds AR: Isle of Pigs
Android 11 dia afaka manolotra fampiasa ADB tsy misy tariby